तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले राजा महेन्द्रलाई यस्तो चिठी लेखे - Naya Patrika
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले राजा महेन्द्रलाई यस्तो चिठी लेखे
काठमाडौं | कार्तिक १७, २०७५
नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अभीष्ट थिएन, तर…
१० माघ, २०१७
पुस २ गतेको चिठ्ठी जुन महाराजधिराजले मलाई अत्यन्तै मेहरबानी गरेर पठाउनुभएको थियो, लगभग एक महिनाभन्दा अलि अगाडि नै प्राप्त भयो । तपाईंंकै सल्लाहअनुसार, मैले हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि पत्रको अन्तर्वस्तुबारे सूचित गरेको छु ।
पत्रको जवाफ लेख्न ढिलो भएकोमा म क्षमाप्रार्थी छु । पहिलो कुरा, पत्रमा तपार्इं आफैँले प्रसन्नतापूर्वक चाल्नुभएको शाही कदमबारे सूचना दिन खोज्नुभएको हुनाले त्यस अवस्थामा कुनै विशेष प्रकारको जवाफ लेखिहाल्नहुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने कुरामा म बिल्कुलै अन्योलमा थिएँ र मौजुदा परिस्थितिमा म तपार्इंलाई के लेखूँ भन्ने कुरामा अत्यन्तै अस्पष्ट पनि ।
पछि थाहा पाएँ कि महाराजधिराजले नयाँ सरकार गठन गर्दा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएका डा. तुलसी गिरी मलाई भेट्न भारत आउँदै हुनुहुन्छ । अनि मैले तपाईंको पत्रको जवाफ लेख्नुभन्दा पहिले उहाँको आगमन र उहाँसँग हुने संवादका लागि केही समय पर्खिने निर्णय गरेँ ।
मैले डा. तुलसी गिरीलाई माघ २० गते भेटेँ र उहाँसँग करिब दुई घन्टा लामो छलफल भयो । संवादका क्रममा डा. गिरीले वर्तमान परिस्थितिबारे तपाईंको दृष्टिकोणका सम्बन्धमा मलाई जानकारी गराउनुभयो । साथै, मैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत धारणा उहाँलाई व्यक्त गरेँ । हाम्रो दुई सरकारबीचका केही आसन्न मामिलाबारे पनि हामीले छलफल ग‍-यौँ । मलाई के अनुमान छ भने डा. तुलसी गिरीलाई मैले जे भनेँ त्यो तपाईंलाई अवगत गराउनुहुनेछ । फेरि पनि, उहाँसँग छलफल भएका विषयवस्तुका सम्बन्धमा मैले तपाईंलाई लेख्न पाउने स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै छु र म सबै ऋजुतामा यस्तै गर्छु किनभने हामीले एक–अर्कासँग निष्कपट र मित्रवत् व्यवहार गरेनौँ भने यो तपाईंका लागि साथसाथै मेरा लागि पनि अनुचित हुनेछ ।
सबभन्दा पहिला, मैले राष्ट्रिय र केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समस्याका लागि मेरो मौलिक दृष्टिकोणबारे प्रस्ट पार्नुपर्छ । यी दुइटा विषय धेरै हदसम्म जोडिएको हुन्छ र एकले अर्कालाई प्रभावित गर्छ । म अहिले ७१ वर्षभन्दा बढी उमेरको भइसकेको छु । सन् १९१२ मा जब म क्याम्ब्रिजमा आफ्नो अध्ययन सकेर बेलायतबाट फर्केँ अनि मलाई न्यायालयका लागि आमन्त्रण गरियो ।
यहाँसम्म कि म बेलायत हुँदा पनि राजनीति र आर्थिक मुद्दाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरू र विशेषगरी भारतको स्वतन्त्रतामा अत्यधिक दिलचस्पी राख्थेँ । यहाँ फर्किसकेपछि मलाई स्वतन्त्रताका लागि भारतीय संग्राममा सामेल गराइयो । केही वर्षपछि जब माहात्मा गान्धी हाम्रो महासंग्रामको नेता हुनुभयो र वास्तवमा जसरी यस देशका लाखौँ जनसमुदाय, मेरा बुबा र बाँकी हाम्रो सम्पूर्ण परिवार उहाँसँग सम्मिलित भयो, त्यसरी नै म पनि उहाँसँग अन्तरात्माले संलग्न भएँ । त्यसपछि मेरो जीवन ३० वर्षका लागि उक्त महान् संघर्षको एउटा सानो हिस्सा बनेर बित्यो । यहाँसम्म कि मेरो पारिवारिक जीवनसँग सम्झौता गरेरै भए पनि म निरन्तर रूपमा यसमा तल्लीन भइरहेँ ।
निःसन्देह, जेलमा उहाँहरूसँगको लामो अवधिको बसाइ र अरू वेलामा मेरो जीवनको अत्यन्त व्यस्त सक्रियताजस्ता अन्य सबै अनुभवको मेरो जीवनमा एउटा शक्तिशाली प्रभाव थियो र मलाई सशक्त बनायो । मैले सोचेँ र लेख्ने पढ्ने गरेँ । यसबारे मेरा केही पुस्तकले के व्याख्या गर्छन् भने म ती प्रभावमा कसरी हुर्के–बढेँ र कस्तो अनुभूति गर्थेँ । मेरा गतिविधिहरूमा प्रकट भएजस्तै जेलभित्रका एकांकीपनले गर्दा मेरा पछिल्ला अवधारणाले एउटा दृढ आकार ग्रहण ग-यो । मलाई लाग्दछ कि मेरो चरित्र राम्रो वा खराबका लागि जे भए पनि त्यस्ता विविध अनुभवबाट निर्माण भयो जुन मैले जीवनमा भोग्नुपरेको थियो ।
लगभग दुई वर्षअगाडि, मैले लेखेका र प्राप्त गरेका केही पुराना चिठीपत्रलाई समाविष्ट गरेर एउटा किताब प्रकाशन गरेको थिएँ । ती चिठीपत्रलाई पढेपछि, म के जानकारी पाएर आश्चर्यचकित भएँ भने कसरी मेरो सोच ३०–४० वर्षपहिले व्यापक रूपले उस्तै थियो जस्तो यो आज छ । यद्यपि, त्यस वेलादेखिकै तरह–तरहका तौरतरिकामा पनि मलाई कुनै शंका उत्पन्न भएन । यस प्रकारको सोचले मलाई लोकतन्त्र र साधारणतः के भन्न सकिन्छ भने जतिसक्दो समानता सम्भव हुने समाजको समाजवादी संरचनाप्रति मलाई अविचल आस्थावान् बनाइदियो ।
म सम्पूर्ण सामन्ती विशेषाधिकारको विरोधी भएँ । साथै, व्यापार–व्यवसाय र उद्योगको क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपले अत्यधिक धन सञ्चित गर्ने सोचको पनि उत्तिकै विरोधी भएँ । यी सबै मलाई असमाजिक तथा विशेषगरी अशिष्ट लाग्थ्यो । अझ, मेरो आफ्नो विचारको अतिरिक्त मैले के महसुस गर्न थालेँ भने परिवर्तनका लागि संसारमा धेरै शक्तिशाली ताकतहरूले काम गरिरहेका थिए र अन्ततोगत्वा तिनीहरूलाई अवरोध गर्न सकिँदैनथ्यो । परिवर्तन शान्तिपूर्वक अथवा हिंसात्मक संघर्षपछि आउन सक्छ । तर, गान्धीजीसँगको मेरो सम्पर्कले मलाई एउटा महान् राष्ट्रवादी संघर्षजस्तो संग्राममा पनि शान्तिपूर्ण तरिकाहरू अनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्ने एक अविचलित आस्थावान् मानिस बनाइदियो ।
त्यही पृष्ठभूमि र प्रशिक्षणको साथले हो, १३ वर्षपहिले मैले भारत सरकारमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पदभार ग्रहण गरेँ । त्यसपछि मलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै समस्यासँग सरोकार राख्नुप-यो । म कति सफल भएँ वा भइनँ, यसको आकलन निर्णय गर्नेका लागि इतिहास छ र अरू छन् । म आफैँलाई थाहा छ, धेरै सन्दर्भहरूमा म असफल भएको छु । तर, ती आदर्शहरू सधैँ मेरो सामुन्ने अविचल रूपले उभिरहे र म तिनीहरूकै अनुसार काम गर्ने कोसिस गरिरहेको छु । यद्यपि मलाई थाहा छ, धेरैजसो समयमा आफ्नै आदर्शमा बाँच्न पनि गा‍ह्रो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको सम्बन्धमा गुटनिरपेक्षता, तटस्थताको हाम्रो नीति मौजुदा परिस्थिति र व्यावहारिक रूपले उनीहरूको नजिक हुनुपर्ने कारणले गर्दा मात्र थिएन, बरु मैले जुन माथि उल्लेख गरेका अत्यन्त गहन विचार छन्, त्यसमा आधारित थियो र मलाई विश्वास छ ती विचार मूल रूपले भारतको भावनासँग मेल खान्छ ।
हाम्रो स्वतन्त्रतापछिका सुरुवाती दिनमा, नेपालबारे के गर्ने भनेर प्रश्न हामीसामु आयो । यद्यपि त्यस समयमा नेपाल एउटा स्वतन्त्र राज्य भए पनि व्यावहारिक रूपले आफ्नो वैदेशिक–सम्बन्धको मामिलामा ब्रिटिश शक्तिद्वारा संकुचित र परिसीमित गरिएको थियो । बेलायती राजदूतले काठमाडौंमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्थ्यो र उसका केही गतिविधिका कारणले गर्दा उसलाई भारतमा भाग्नुप-यो भन्ने कुरा मलाई तपाईंको श्रद्धेय बुबा र त्यस वेलाका राणा प्रधानमन्त्रीले सुनाउनुभएको थियो । हामी नेपाल हामीसँग मित्रवत् सम्बन्ध भएको एउटा अविच्छिन्न स्वाधीन र आत्मनिर्भर देश होस् भन्ने चाहन्थ्यौँ जुन प्राकृतिक र स्वाभाविक पनि थियो । त्यसकारण, हामीले पूर्ण स्वाधीनताको तथ्यलाई तत्कालै स्वीकार ग-यौँ ।
नेपालमा हाम्रो सरोकार भनेको यसको स्वाधीनतामा मात्र थियो जुन हाम्रो प्रचलित नीतिबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । ठीक त्यही समयमा हामीले के महसुस ग-यौँ भने विगतका इतिहास, संस्कृति र भूगोलले नेपाल र भारतलाई अविच्छिन्न रूपले एक–अर्काको नजिक बनाएको छ र केही विषयवस्तुमा मुख्यतः वैदेशिक मामिला र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा हामीले आपसी परामर्शका माध्यमले गहिरो सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्छ । यो दुवै देशको आपसी हितका लागि थियो र स्वाभाविक रूपमा हाम्रो चाहना पनि थियो कि नेपालले राजनीति र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा विकास गरोस् र लोकतान्त्रिक समाजका रूपमा अघि बढोस् ।
नेपालसँग हाम्रो पहिलो सन्धि पुरानो राणा प्रधानमन्त्रीसँग भयो । यद्यपि, त्यस वेलाको नेपाल सरकारको राजनीति र आर्थिक रूपरेखासँग हामी बिल्कुल असहमत थियौँ, तर हामीले हस्तक्षेप गर्न उचित ठानेनौं । केही पछि तपाईंका श्रद्धेय बुबा उदारवादी हुनुहुन्थ्यो भन्ने थाहा पाएर हामी
खुसी थियौँ ।
त्यसपछि नेपालमा केही आन्तरिक समस्या उत्पन्न भए । महाराजधिराज, तपाईंको बुबा, भारतका लागि प्रस्थान गर्नुभयो । वास्तवमा, उहाँ एउटा नयाँ उदारवादी शक्तिको नेताका रूपमा देखिनुभएको थियो । हामीले उहाँलाई यहाँ एउटा सम्मानित अतिथिका रूपमा स्वागत ग-यौँ । जब नेपालमा परिस्थिति बिग्रन थाल्यो राणा प्रधानमन्त्री हामीकहाँ आउनुभयो र समाधान खोज्न हस्तक्षेप गरिदिनुप-यो भनी आग्रह गर्नुभयो । हामी सम्भावित गृहयुद्ध रोक्न र राजाको नेतृत्वमा एउटा स्थिर एवं प्रगतिशील सरकार बनाउनका लागि सहयोग गर्न उत्सुक थियौँ । हाम्रो परामर्शको परिणाम स्वरूप त्यहाँ झगडा रोकियो, राजा नेपाल फर्किनुभयो र नयाँ सरकारको स्थापना भयो ।
त्यो एउटा संयुक्त सरकार थियो । सुरु गर्नका लागि राणा प्रधानमन्त्रीकै निरन्तरता रह्यो । तर, पछि उहाँलाई निरन्तरता दिइरहन सम्भव भएन । त्यसउप्रान्त त्यहाँ बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरह्यो र कहिलेकाहीँ त्यहाँ मन्त्रिमण्डल नै हुँदैनथ्यो , तर सधैँ उद्देश्य र सार्वजनिक अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक संरचना, आवधिक निर्वाचन र केही प्रकारको संसदीय सरकारप्रति लक्षित हुन्थ्यो । नेपालमा धेरै प्रतिकूलताको सामना गर्नुप-यो । त्यसमा प्रमुख थियो प्रशिक्षित कर्मचारीको अभाव । जबजब हामीलाई आग्रह गरियो, हामीले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने अभीष्टबेगर नै सहयोग गर्ने प्रयास गरिरह्यौँ । हामीले दुःखका साथ के हेर्नुप-यो भने स्थायित्व कहिल्यै आएन, बरू बारम्बार परिवर्तन भइरहने अस्थिर सरकारहरूले निष्प्रभावी एवं अक्षम ढंगले कार्य गरिरहे ।
त्यसपछि महाराजधिराज (तपाईं) गद्दीमा आसीन हुनुभयो । उचित संविधान बनाउने, निर्वाचन गराउने र प्रजातान्त्रिक सरकार नियुक्त गर्ने तपाईंको निर्णय सुनेर हामी खुसी थियौँ । हामीलाई के विश्वास भयो भने यो नै एउटा उपयुक्त निकासको दिशा थियो, होइन भने अस्थिरताले हानिकारक रूपले निरन्तरता पाइरहनेछ । तपाईंले आफ्नो जनतालाई दिनुभएको वचन पूरा गर्नुभयो र निर्वाचन गराउनुभयो र त्यसपश्चात् मतादेशअनुसारको सरकार गठन गर्नुभयो । यो दुई वर्षपहिलेको कुरा हो । आइपरेका सम्पूर्ण समस्यालाई मध्यनजर गर्दा त्यो मतदान पूर्ण रूपले सफल थियो जसको परिणाम स्वरूप अत्यधिक बहुमतका साथ एउटा बलियो राजनीति पार्टीको उदय भयो ।
मौसुफलाई सम्झना होला, मैले कैयौँपटक तपाईंलाई भनेको पनि थिएँ कि नेपालमा मुख्यतः दुइटा मात्र स्थिर तत्वहरु थिए भनेर । पहिलो, राजा र दोस्रो, नेपाली कांग्रेस जो जनताको लोकप्रिय समर्थन पाएको एउटा मात्रै व्यवस्थित राजनीतिक दल थियो । नेपाल अत्यन्त अल्पविकसित देश थियो र त्यस्ता प्रतिकूल अवस्थाहरूमा दुइटैमध्ये अन्य कुनै पनि विषयले आफ्नै बलबुताले मात्र सफल हुन सक्दैनथ्यो । त्यसकारण यो कुरा मलाई के अत्यावश्यक लाग्यो भने दुईटै स्थिर शक्तिहरूले एक–अर्कासँग पूर्ण रूपले सहकार्य गर्नुपर्छ । होइन भने यसको विकल्प भनेको अग्रगमनको अभाव र अस्थिरताको निरन्तरता मात्र हुन्थ्यो ।
म यसमा विशेष जोड दिँदै छु किनभने मलाई के डर छ भने यी दुवैबीच टसल नेपालका लागि हानिकारक सिद्ध हुनेछ । कम्तीमा दुईपटक होला तपाईंले मलाई के भन्ने कृपा गर्नुभएको थियो भने त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचार मौलएको र प्रशासनले सन्तुष्ट रूपले कार्य नगरेको हुनाले सरकारको कार्यसञ्चालन पद्धतिसँग तपाईं असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । यो कुरा सुनेर मलाई दुःख लाग्यो । तर, मलाई के सम्झना आयो भने यी असफलताका लागि पछिल्ला प्रशासनहरू पनि उत्तिकै दोषी थिए र धेरै हदसम्म देश विभिन्न तरिकाबाट पिछडिएको अवस्थामा हुनुको पनि परिणाम थियो । यी समस्याको निवारण गर्ने एक मात्र उपाए थियो, देशलाई अगाडि बढाउनु साथै भष्टाचार र कुशासनसँग लड्नु ।
जनताको व्यापक समर्थन र सहकार्यबेगर वास्तवमा कुनै पनि ठूलो परिवर्तन हुन सक्दैन । टाढाबाट भए पनि मेरो बुझाइ के छ भने नेपालको पछिल्लो सरकारले आफ्ना सबै असफलताबीच पनि पुरातन–प्रशासनको क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याएको थियो । यसका अतिरिक्त थप सुधार र प्रगतिका लागि ढोका खुला भएको थियो ।
जब महाराजाधिराजले मन्त्रिमण्डल र संसद्को दुवै सदनलाई भंग गरेर देशको शासनको सम्पूर्ण बागडोर आफूले लिएको शाही घोषणा गर्नुभयो, म अत्यन्तै दुःखित भएँ । मेरो जीवनभरको प्रशिक्षण र विचारको कारणले यस्तो महसुस हुनु अपरिहार्य पनि थियो र मेरो भित्री आस्थाको कारणले के भन्छु भने तपाईंले जुन लक्ष्य लिनुभएको थियो, यो कदमले त्यहाँसम्म पु‍-याउन सक्दैन । मैले मेरो यो बुझाइ धेरथोर जे–जति भए पनि हाम्रा अधिकांश जनतालाई भनेको पनि थिएँ । म अथवा मेरो सरकारको नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अभीष्ट थिएन, तर भारतमा विद्यमान सरकारी पद्धतिअनुसार संसद्मा मलाई बारम्बार नेपालसम्बन्धी प्रश्न सोधियो र संसदीय प्रणालीअनुसार मैले जवाफ दिर्नुपथ्र्यो । जुन मैले एकदम संयमित र नियन्त्रित भाषामा दिएँ ।
नेपालमा घटेका नयाँ घटनाको शृंखलाप्रति मेरो अप्रसन्नताका अतिरिक्त म यस तथ्यप्रति अति चिन्तित थिएँ कि नेपालका धेरै पत्रपत्रिकाले भारतविरूद्ध द्वेषपूर्ण र अत्यन्तै गलत प्रचार गरिरहेका थिए । तिनीहरूले लगाएका केही आरोप स्पष्टतः अनर्गल र केही हदसम्म अपमानजनक पनि थिए । मलाई थाहा छ, नेपालका सञ्चारमाध्यम अनुभवहीन र अनुत्तरदायी छन् र निरन्तर रहिरहनेछन् । भारतलाई लाञ्छना लगाउनु तिनीहरूको मनोविनोद भइसकेको छ । तर, नयाँ घटनाले तिनीहरूलाई पहिलेभन्दा अझ बढी यस दिशामा हौस्याएको थियो । के कुरा स्पष्ट थियो भने नेपालको विद्यमान परिस्थितिमा देशमा वर्तमान सत्ताधारी शासकको कम्तीमा पनि अनुमति अथवा मौन समर्थनविना कुनै पनि पत्रपत्रिकाले यस्तो रबैया देखाउन सक्दैनन् ।
म महाराजधिराजलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु कि वर्तमान अवस्थाको दृष्टिकोणले मात्र होइन कि भविष्यसँग सम्बन्धित यथार्थहरू जुन आफैँ प्रकट हुँदै जानेछ त्यसबारे पनि विचार गर्नुहोस् । महाराजधिराजलाई मेरो आफ्नो सल्लाह दिने साहस गर्न सक्छु भने यो विद्यमान संकटलाई यही अवस्थामा रहन दिनुहुँदैन र नेपालका नागरिकलाई उनीहरूको विचार व्यक्त गर्ने अधिकार दिन शीघ्र केही कदम चाल्नुपर्छ । यदि मौजुदा संसद्लाई पुनः आह्वान गर्न सकिँदैन भने ताजा निर्वाचन गराउन सकिन्छ ।
यहाँसम्म कि नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रकाशनले पनि केही यस्ता लेखलाई पुनःप्रकाशन गरेको थियो जुन भारतको कटु आलोचना गरेर लेखिएका थिए । के भनिन्छ भने नेपालमा हालसालै भएको परिवर्तनप्रति भारतीय सञ्चारमाध्यममा गरेको आलोचना निर्देशित थियो । यो सत्य हो । फेरि पनि, ती आलोचना निकै सौम्य र केही सिद्धान्तमा आधारित थिए । तपाईंलाई थाहा भएकै कुरा हो, भारतमा सञ्चारमाध्यमले हाम्रो आफ्नो सरकारको निरन्तर रूपले आलोचना गरिरहेको हुन्छ । स्वतन्त्र समाजमा निष्पक्ष सञ्चार हुँदा हामी त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैनौँ । यद्यपि, अहिले तपाईंको सरकारले भारतलाई गाली गर्न बन्द गर्नु भनेर नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई अपिल गरेको छ भन्ने कुरा सुनेर हामीलाई खुसी लागेको छ ।
अनि अहिलेको अवस्था के छ ? भविष्यबारे महाराजाधिराजको के दृष्टिकोण छ भनी मैले डा. तुलसीलाई सोधेँ । उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईंंले प्रजातन्त्रसम्म पुग्ने लक्ष्य लिनुभएको छ । तर, यसका लागि पहिले एउटा सर्त हुन सक्छ, त्यो तपाईं चाहनुहुन्छ कि पहिला आर्थिक उन्नति होस् । आर्थिक उन्नति गर्नु भनेको एउटा लामो समय लाग्ने र निश्चय पनि एउटा कष्टकर मामला हो । यसलाई नागरिकको गतिविधिबाट सुव्यवस्थित र दक्ष सरकारबाट, आमनागरिक र प्रशासनबीचको सहकार्यबाट र निश्चित उद्देश्यलक्षित विशेष नीतिका माध्यमबाट विकसित हुन दिनुपर्छ ।
भारत आफ्नै तीव्र आर्थिक सुधार, औद्योगीकरण र उच्च जीवनस्तरका लागि कार्य गरिरहेको छ । हामी नेपालभन्दा धेरे उन्नत छौँ, हामीसँग बलियो औद्योगिक आधारशीला छ । हामीले सम्पूर्ण तह र तप्काहरूमा द्रुतगतिले शिक्षा फैलाइरहेका छौँ, हामीसँग प्रशिक्षित जनशक्ति छ । तर, पनि हामीले कठिन समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । नेपालमा शिक्षाको स्तर धेरै पिछडिएको छ, प्रशिक्षित जनशक्तिको अभाव छ भने प्रशासन पनि धेरै पुरातन शैलीको छ । अनि कसरी आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति हुन गइरहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग त उपयोगी हुन्छ, तर केही हदसम्म मात्र । वास्तवमा आर्थिक सुधारको प्रक्रिया, जुन पछिल्लो सरकारको पालामा धेरै सुस्त थियो अझ बढी सुस्त हुन सक्छ ।
संसार गतिहीन भएर रहन सक्दैन, न त कुनै देश नै । यदि कुनै देश यसको गतिसँग समवेगले अगाडि बढ्दैन भने यसले नयाँ राजनीतिक र सामाजिक समस्या उत्पन्न गर्छ, जुन आफैँमा संकट पुनरावृत्तिको संवाहक र प्रगतिको बाधक हुन्छ । यसकारण, मैले के बुझ्न सकिनँ भने नेपाल आन्तरिक रूपमा निरन्तर संकटमा फसिरहेको वेलामा कसरी कुनै गौरव गर्नलायकको आर्थिक प्रगति गर्न सक्छ ? देश गतिरोधको स्थितिमा फस्दै जान्छ साथै राष्ट्रको ऊर्जा आन्तरिक द्वन्द्वमा नष्ट हुँदै जान्छ भने त्यसले देशलाई नै कमजोर बनाउने हो ।
यदि वर्तमान परिस्थिति जारी रहिरह्यो भने सरकारको प्रगतिशील संरचना र स्थायित्वको म कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ । यो अवस्था झन्–झन् खराब हुँदै जान्छ, अनि तपाईं र तपाईंको देशले अझ ठूलो समस्यासँग सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो संकटको घडीमा हुन सक्छ तपाईं बाह्य सहयोग माग्नेबारे सोच्नुहुन्छ होला । केही हदसम्म यो उपलब्ध पनि हुन सक्छ, तर यसले देशमा अझ नयाँ जोखिम र नयाँ कमजोरी उत्पन्न गर्छ ।
नेपालको सिमानासँग जोडिएका दुइटा देशहरू भारत र चीन छन् । नेपाल भारतसँग धर्म, संस्कृति, इतिहास र भूगोलको आधारमा जोडिएको छ । यिनीहरू स्थायी तथा मूलभूत अवयवहरू हुन् जुन समयको बहावसँगै धेरै परिवर्तन हुँदैन । जहाँसम्म भारतको चिन्ता छ, हामी यसरी प्रशिक्षित भएका छौँ कि हामी नेपालमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण र अतिक्रमण गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो सम्पूर्ण संरचनाले यसको विरोध गर्छ र हाम्रो सरकारको स्वरूप र नागरिकले पनि यसको विरोध गर्नेछन् । हामीले यसबाट केही पनि प्राप्त गर्दैनौँ ।
अर्कातिर, चीन पूर्ण रूपले फरक प्रणालीमा कार्य गर्छ, वर्तमानमा उसको कार्यशैली आक्रामक देखिन्छ । हामी भारतीय हाम्रो चीनसँगको सिमानामा शान्तिपूर्ण वातावरण चाहन्छौँ र वास्तवमा त्यो महान् राष्ट्रसँग सधैँ मित्रवत् सम्बन्ध राख्ने लक्ष्य लिएका छौँ । तर, चिनियाँ सरकारले भारतविरुद्ध आक्रमक नीति अख्तियार गरेको छ र त्यो हामी कदाचित् सहन सक्दैनौँ । हामी चीनको अतिक्रमणको सामना गर्न धेरै हदसम्म बलियो छौँ । तथापि, चाहे जतिसुकै लामो समय लागे पनि अन्तिमसम्म हामीले चीनसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम राख्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।
नेपालसँगको स्थिति फरक छ । कमजोर छ र आफ्नो उत्तरतर्फको सिमानामा आउने कुनै पनि जोखिमपूर्ण संकटको सामना गर्न असमर्थ हुन सक्छ । के सम्भव छ भने चीनले निकट भविष्यमा नेपाललाई भारतसँग टाढा राख्न मित्रता स्थापित गर्न कोसिस गर्नेछ । यो महाराजाधिराजले सोच्नुपर्ने हो कि नेपाल र चीनबीच अत्यन्त न्यून साझा सरोकार भएको कारणले अन्ततोगत्वा यो मित्रता नेपालको आफ्नो हितमा हुन्छ कि हुँदैन । हामीलाई लाग्छ, भारतसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आफैँमा चीनका सबै सम्भावित अतिक्रमण रोक्न सक्षम हुनेछ ।
यसर्थ, नेपालको वर्तमान गतिविधिबाट म अत्यन्तै गम्भीर भएको छु किनभने मलाई लाग्छ, यस्ता गतिविधि निरन्तर चलिरहेको खण्डमा यसले अनिवार्य रूपले आन्तरिक द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । छिटोभन्दा छिटो प्रजातान्त्रिक संरचनामा फर्किनुबाहेक यो उल्झनबाट पार पाउने अरू कुनै उपाय छैन । जति धेरै ढिलो हुन्छ नेपालले त्यति नै बढी प्रतिकूल समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको संवैधानिक प्रगति हुनै सक्दैन जबसम्म यो बाटो अवरुद्ध रहिरहन्छ । त्यसपछि जनताहरू असंवैधानिक तरिकाले प्रदर्शनहरू गर्नेछन् र नेपाल धेरै नराम्रोसँग गृहयुद्धको भुमरीमा फस्नेछ ।
नेपालप्रतिको हाम्रो महान् मित्रता र आस्थाका कारणले गर्दा मैले यो पत्र बिल्कुल इमानदारीपूर्वक स्पष्ट रूपले लेख्ने कोसिस गरेको छु । यो मित्रता नेपाल र भारत दुवैको आपसी हितका लागि आवश्यक पनि छ । मैले माथि भनेजस्तै, नेपालप्रति हाम्रो कुनै अभीष्ट पनि छैन र हस्तक्षेप गर्ने कुनै चाहना पनि छैन । हाम्रो मुख्य अभिरुचि एक स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक नेपालको विकासमा मात्र निहित छ । स्वाभाविक रूपले हामी हाम्रो आफ्नै सुरक्षामा पनि रुचि राख्छौँ र नेपालमा जुन गतिविधि हुन्छ त्यसले हाम्रो सुरक्षामा पनि असर गर्न सक्छ ।
यसकारण, म महाराजाधिराजलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु कि वर्तमान अवस्थाको दृष्टिकोणले मात्र होइन कि भविष्यसँग सम्बन्धित यथार्थहरू जुन आफैँ प्रकट हुँदै जानेछ त्यसबारे पनि विचार गर्नुहोस् । महाराजाधिराजलाई मेरो आफ्नो सल्लाह दिने साहस गर्न सक्छु भने यो विद्यमान संकटलाई यही अवस्थामा रहन दिनु हुँदैन र नेपालका नागरिकलाई उनीहरूको विचार व्यक्त गर्ने अधिकार दिन शीघ्र केही कदम चाल्नुपर्छ । यदि मौजुदा संसद्लाई पुनः आह्वान गर्न सकिँदैन भने ताजा निर्वाचन गराउन सकिन्छ ।
यदि त्यहाँ भ्रष्टाचार छ भने त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट कडा कारबाही गर्नुपर्छ । यदि त्यहाँ प्रशासनतन्त्र खराब छ भने त्यसलाई दुरुस्त पार्नुपर्छ, तर केवल अस्पष्ट र संदिग्ध आरोप लगाएर जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने सम्भावना छैन । बेलायत नेपालप्रति एकदम स्नेही छ, तर नेपालको वर्तमान संकटबारे त्यहाँको सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका आलोचना पनि सायद तपाईंले पढ्नुभएको होला । आजको दिनमा विश्व अभिमतले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूको पूर्ण प्रतिगमनलाई सजिलै सहन सक्दैन ।
(कांग्रेस नेता प्रदिप गिरिबाट प्राप्त)
#चिठी #नेहरू #राजा महेन्द्र
पुस्तक समीक्षा : सार्वभौम सोचका कुलराज
आफ्नो पहिचान आफैँले बनाएकी पद्मावती
कविता : समय आइसकेको छ मेरा कवि साथी
यस्ता छन् जुकरबर्गले दिएका सफलताका १० सूत्र
प्रचण्डपुत्र प्रकाशको पहिलो स्मृति सभा (तस्बिरहरु)
सम्झनामा एउटा लडाकु
‘पञ्चायती’मै बलात्कार गर्न पाउनुपर्ने मागको विरोध गर्दा कुटिएका सांसदले दिए माफी
बलिउडका महँगा बिहे
सामाजिक सञ्जालबाट अपराध
मुद्दा फैसलालाई तीब्रता दिँदै हेटौंडा इजलास : मुद्दा दर्ता र फैसला लक्ष्यभन्दा बढी
प्रकाश स्मृति कप : क्वाटर फाइनलमा दोलखा विजयी
बढी कर बुुझाउने करदाता सम्मानित
प्रथम मर्स्याङ्दी महोत्सव सुरु
विवाद नमिल्दा भगवतिमाई गाउँपालिकामा लागेको ताला अझै खुलेन